Ra'iisal wasaaraha magacaaban ee Xasan Kheyre oo farriin degdeg ka helay Ra'iisal Wasaaraha Turkiga - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Home Xukuumadda Ra’iisal wasaaraha magacaaban ee Xasan Kheyre oo farriin degdeg ka helay Ra’iisal...
Ra’iisal wasaaraha magacaaban ee Xasan Kheyre oo farriin degdeg ka helay Ra’iisal Wasaaraha Turkiga
Ra’iisal wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kulan la yeeshay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Bekar.
Kulanka ayaa ku saabsanaa sidii Ra’iisal wasaaraha la magacaabay ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre loo soo gaarsiin lahaa dhambaal iyo farriin degdeg ah oo uu u soo diray Ra’iisal wasaaraha Turkiga Binali Yıldırım.
Safiirka Turkiga Olgan Bekar ayaa sheegay in farriintu ku saabsan tahay xaaladdaha degdega ah ee Soomaaliya ka jira iyo sidii wax looga qaban lahaa iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah bixin.
Ra’iisal wasaare Kheyre oo xilka loo magacaabay Khamiistii ayaa durba bilaabay dhaqdhaqaaq shaqo iyadoo aanu weli kalsooni ka helin Baarlamaanka oo lagu wado inuu hor geeyo madaxweynaha.
Hassan Ali Khiere
Previous articleDHAGEYSO: Ciidamo shaqada laga eryay oo kashifay Qorshe halis ah oo ka socda Xero ay maamulaan Imaaraadka Carabta
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Banaadir oo amar kasoo saaray Wadooyinka xiran ee Muqdisho [Dhageyso]